Firenena tsy hivezivezy mandritra ny Coronavirus: San Marino no ratsy indrindra, nilatsaka ho 12 i Sina, Etazonia 8, Etazonia 48
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Firenena tsy hivezivezy mandritra ny Coronavirus: San Marino no ratsy indrindra, nilatsaka ho 12 i Sina, Etazonia 8, Etazonia 48
Coronavirus dia hisy fiantraikany amin'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena
110,090 izao no voan'ny Coronavirus. Olona 3831 no maty ary 62,301 19 no sitrana tamin'ny COVID-XNUMX
Shina no mbola firenena manana aretina betsaka indrindra (80,738) saingy miorina amin'ny isan'ny firenena ary ampitahaina amin'ny isan'ny aretina dia China 12 ihany no any Korea, isa 6, Italia 8, Iran 10 ary Etazonia. an'i Amerika dia mbola hita ho azo antoka ihany amin'ny isa 48.
Naratra mafy ny dia sy fizahan-tany ary mbola tsy misy farany. Na izany aza, ny ankamaroan'izao tontolo izao dia mijanona ho azo antoka ihany. Ity misy lisitr'ireo firenena 53 izay manana tranga Coronavirus maherin'ny 1 isaky ny mponina. Firenena roa samy voahodidin'i Italia, San Marino ary Vatican City no mitarika an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny firenena kely iray hafa Liechtenstein, mitazona eo anelanelan'ny Austria sy Suisse no laharana faha-3.
Mazava ho azy fa tsy misy amin'ireo firenena voatanisa toerana 1 ka hatramin'ny 5 ireo manana mponina iray tapitrisa, ka isaina araka izany. Ny tanàna Vatican dia manana tranga iray ihany, fa manana mponina 5000 fotsiny, ka nahatonga azy ho laharana 2.
Ny firenena ratsy indrindra misy mponina iray tapitrisa mahery dia Korea Atsimo ankehitriny, arahin'i Italia, Iran, ary China.
Firenena 17 ihany no manana olona maherin'ny 25 amin'ny iray tapitrisa.
Lisitry ny firenena 53 manana tranga maherin'ny 1 isaky ny tapitrisa voan'ny COVID-19:
Tanànan'i Vatican: 1000
Korea atsimo: 144
Espana: 14.4 XNUMX
Alemanina: 12.4 XNUMX
Repoblika Tseky: 3.0
Makedonia Avaratra: 1.4
Manam-pahaizana momba ny dia sy fizahan-tany: www.fioritsourism.com
Zavatra 5 hodinihina alohan'ny handehanana mitsangatsangana Safari any Afrika
Nile Cruise nivadika fitsangatsanganana Coronavirus mahafaty ho an'ny mpizahatany alemanina